सासु ससुरा र छोरिहरु लाइ अदालत लैजादै, कोको छुट्न सक्छन वोकिलले खुलाए ( भिडियो सहित ) - Celebrity News
सासु ससुरा र छोरिहरु लाइ अदालत लैजादै, कोको छुट्न सक्छन वोकिलले खुलाए ( भिडियो सहित )
१७ असार २०७७, बुधबार ०६:५३ July 1, 2020 AD / Banner News / Highlights News / भिडियो / रोचक / विविध / समाचार / स्वास्थ्य / जीवनशैली
हेटौंडामा भएको घटनामा आज अभियुक्त भनिएका एकै परिवारका चार जना लाई अदालतमा पेस गरिँदै छ । सुस्मिता थापाको कर्तब्य गरि ज्या न लिएको अभियोगमा एकै परिवारका , सासु ससुरा , नन्द र अमाजु पक्राउ परेका छन। घरमा बुहारीलाई गलत नजर अगाउने र ह त्या सम्मको जघन्य अपराध गरेको र अपराधमा सहयोग गरेको भनेर चार जनालाई अहिले हिरासतमा राखिएको छ।
यसै बिषयमा अधिवक्ताले आज अदालतमा के के हुन सक्छ भनेर बताएका छन। अधिवक्ताले बताए अनुसार आज के के प्रक्रिया चल्छ भनेर बताएका छन। थप भिडियोमा तल हेर्नुहोस।
यसरी भएको थियो घटना : मध्यरातमा सुस्मिताले ‘बचाउ !’ भन्दै कराएकी थिइन्, छिमेकीले सुनाए घटना विवरण
हेटौडामा परिवारकै सदस्यले ह त्या गरिएको भनिएकी सुस्मिताको वारेमा उनका छिमेकी पनि निकै राम्रो कुरा गर्छन । अरु वुहारी जस्तो बानी थिइन निकै सज्जन थिइन् । भान्छामा केही पकाएको छ भनेपछि छिमेकीका बालबालिकालाई बाँडेर दिन्थिन् । कसैसंग त्यसरी कुरा गरेको पनि देखिएन, एक छिमेकी महिलाले भनिन् । उनले घटना भएको कुरा हिान ८ वजे तिर थाहा पाएको बताइन् ।
घरको झ्यालवाट आफुसंग कुराकानी गर्ने गरेको बताइन् । उनले तर घटना भएको २ दिन यता भने सुस्मिता नबोलेको बताइन् । भान्छामा बत्ती पनि बलेको देखिन ति महिलाले भनिन् । उनले पैसाकै कारण परिवारकै सदस्यले ह त्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिन् । असोज महिनामा श्रीमान वितेका थिए । उनका श्रीमानले एक करोड रुपैयाको इन्सुरेन्स गराएको र त्यो पैसा सुस्मिताकै नाममा आउन लागेपछि परिवारका सदस्यले ह त्या गरेको हुनसक्ने बताएकी छन् ।
त्यो दिन राती एउटा कोठामा बस्ने सानी बालिकाले राति १२ वजेतिर ‘बचाउ’ भनेर चिच्याएको सुनेको बताएकी थिइन् । विहान सुस्मिता निधन भएको खबर पाएपछि बच्चीले त्यो आन्टी म’र्यो ममी ? मैले त राति ‘बचाउ ! बचाउ!’ भनेर चिच्याएको सुनेको बताएकी थिइन् ।
कपिलवस्तुको वाढगंगा माइती भएकी सुस्मिताको केही महिना अघि मात्र धुमधामसंग विवाह भएको थियो । भर्खरै वैवाहिक जिवनको रंगिन संसारमा उनी रमाउदै थिइन् । तर त्यो रमाइलो समय विताएको ६ महिना नपुग्दै सुस्मिताले आफ्नो जिवनसाथी गुमाइन् । श्रीमान वितेको पी’डा बोकेर बसेकी सुस्मिताको पनि अचानक निधन भयो ।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा सुस्मिताको ससुरा र नन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सुस्मिताको श’व भान्छामा निकै विभ’त्स अवस्थामा देखिएको थियो । ति महिलाले आफुसंग पनि प्रहरीले वयान लिएको बताएकी छन् ।
दुई दिन देखि ति सुस्मिता चुपचाप बसेको आफुले देखेको बताइन् । आफ्नो घर र सुस्मिताको भान्छा नजिकै भएका कारण भान्छामा भएको कृयाकलाप आफुहरुले देख्ने गरेको बताइन् । पहिला नन्दसंग कुरा गर्दै काम गरेको देख्ने गरेको छिमेकी महिलाले दुई तिन दिन यता नन्दसंग पनि कुरा गरेको नदेखेको बताइन् । उनी चुपचाप काम गर्दै गरेको आफुले देखेको बताइन् ।
ति महिलाले सुस्मिताको घर परिवारका सासु ससुरा लगायतका सदस्य अलि घमण्डी स्वभावको भएको बताइन् । साना बालबालिका घर नजिक गएपनि गा’ली गर्ने गरेको छिमेकी महिलाको भनाई छ । बच्चाबच्ची त अलि चञ्चल हुन्छन्, मन्दिरको नजिक गएपनि त्यो घरको बुवाले गा’ली गर्थ्यो, उनले भनिन् पैसाको लागि उनको ज्यान लिन भन्दा बरु पैसा हामीलाई देउ भनेर भनेको भए पनि सुस्मिताले दिन्थ्यो होला । सुस्मितालाई त हामीले निकै राम्रो स्वभावको देखेका थियौं ।’
यी हुन ५४ बर्षिया महिला ट्रक चालक, सडकमा हेर्नुहोस् यिनको सान (भिडियो)
सिराहामा नहरमा डुबेर सशस्त्र प्रहरी जवानको ज्यान गयो, इलाममा पनि एक व्यक्तिको डुबेर निधन